မကျြရညျတဈစကျမှာ … အဓိပ်ပါယျတှေ အမြားကွီးရှိနနေိုငျပါတယျ …. - ONE DAILY MEDIA
မကျြရညျကတြယျ ၀မျးနညျးလို့ လှမျးဆှေးလို့ ဆိုပွီး တရားသမေတှကျစခေငျြဘူး … ၀မျးသာလို့ကတြဲ့ မကျြရညျတှေ ရှိသလို နောငျတတှနေဲ့ နာကငျြလို့ ကတြဲ့ မကျြရညျတှလေဲ အမြားသားပါ ။ မကျြရညျဆိုတာ … ဦးနှောကျက စီးဆငျးလာတာမဟုတျပဲ နှလုံးသားက ဖွတျသနျးစီးဆငျးလာတာမြိုးပါ ။
ဘယျလိုကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈပါ … မကျြရညျကတြယျဆိုကတညျးက စကားနဲ့ ပွောမထှကျတဲ့ ၀မျးသာမှု နာကငျြမှုတှကေို နှလုံးသားက အလိုလိုဘာသာပွနျပွတယျလို့ပဲ မှတျယူလို့ရတယျ ။ တဈခြို့ စကားလုံးတှကေ … နှုတျက မထှကျလာတတျပဲ မကျြရညျနဲ့ ပွတတျကွတယျ ။
ရညျးစားနဲ့ကှဲလို့ မကျြရညျကတြဲ့အခါ … သူ ၀မျးနညျးနတောလို့ပဲ ပုံသေ မှတျယူလို့မရဘူး … အခြိနျတှဖွေုနျးခဲ့မိပါလား ယုံကွညျခဲ့မိပါလား … ဒါမှမဟုတျ တခွားအကွောငျးအရာတှနေဲ့ နာကငျြနရေတာလဲ ဖွဈနိုငျတယျ ။ ကြှနျမ မကျြရညျကခြဲ့တုနျးက … သူငယျခငျြးတှကေ အားပေးနှဈသိမျ့ကွတယျ … မတနျပါဘူး မငိုပါနဲ့ တဲ့ ကြှနျမစိတျထဲမှာ အဲ့လို မကျြရညျနဲ့မတနျတဲ့လူအနား ဘာကွောငျ့ ကပျတှယျခဲ့မိလဲဆိုတဲ့ နောငျတတှေ ရနတောပါ ပွနျပွီး လှမျးဆှေးတောငျ့တနတော မဟုတျဘူး ။
မကျြရညျကရြငျ ရှုံးတယျဆိုပွီးလဲ ပွောတတျကွသေးတယျ ။ တကယျတော့ အနိုငျအရှုံးဆိုတာ မကျြရညျနဲ့ မဆိုငျဘူးလေ ။ ကိုယျ ဘာဖွဈနပေါတယျ ကိုယျ ဘာတှခေံစားနရေတယျဆိုတာကို ထုတျပွောခှငျ့ မရှိတဲ့ဘ၀မှာ မကျြရညျကခြှငျ့လေးတော့ ရခငျြမိတယျ ။ ဒါအရှုံးပေးတာ မဟုတျဘူး ပြော့ညံ့တာ မဟုတျဘူး … ကိုယျ့ဒဏျရာကို မကျြရညျနဲ့ ခဏ မွောခပြွီး မထေ့ားလိုကျတာမြိုးပါ ။
အဆငျပွပေါတယျဆိုတဲ့စကားနောကျမှာ ဝဲတဲ့ မကျြရညျတှကေ ကိုယျ့ကွောငျ့ သူပူသှားမှာ စိုးတဲ့ စတေနာတှပေါတယျ … ဖုနျဝငျသှားလို့ပါဆိုပွီး လိမျခဲ့တဲ့ မကျြရညျတှမှော ကိုယျ့ကွောငျ့ သူအဆငျမပွဖွေဈသှားမှာ စိုးတဲ့စိတျတှပေါတယျ ။
မျက်ရည်တစ်စက်မှာ … အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ် …. မျက်ရည်ကျတယ် ၀မ်းနည်းလို့ လွမ်းဆွေးလို့ ဆိုပြီး တရားသေမတွက်စေချင်ဘူး … ၀မ်းသာလို့ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေ ရှိသလို နောင်တတွေနဲ့ နာကျင်လို့ ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေလဲ အများသားပါ ။ မျက်ရည်ဆိုတာ … ဦးနှောက်က စီးဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲ နှလုံးသားက ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလာတာမျိုးပါ ။
ဘယ်လိုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ … မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုကတည်းက စကားနဲ့ ပြောမထွက်တဲ့ ၀မ်းသာမှု နာကျင်မှုတွေကို နှလုံးသားက အလိုလိုဘာသာပြန်ပြတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူလို့ရတယ် ။ တစ်ချို့ စကားလုံးတွေက … နှုတ်က မထွက်လာတတ်ပဲ မျက်ရည်နဲ့ ပြတတ်ကြတယ် ။
ရည်းစားနဲ့ကွဲလို့ မျက်ရည်ကျတဲ့အခါ … သူ ၀မ်းနည်းနေတာလို့ပဲ ပုံသေ မှတ်ယူလို့မရဘူး … အချိန်တွေဖြုန်းခဲ့မိပါလား ယုံကြည်ခဲ့မိပါလား … ဒါမှမဟုတ် တခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ နာကျင်နေရတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ။ ကျွန်မ မျက်ရည်ကျခဲ့တုန်းက … သူငယ်ချင်းတွေက အားပေးနှစ်သိမ့်ကြတယ် … မတန်ပါဘူး မငိုပါနဲ့ တဲ့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ အဲ့လို မျက်ရည်နဲ့မတန်တဲ့လူအနား ဘာကြောင့် ကပ်တွယ်ခဲ့မိလဲဆိုတဲ့ နောင်တတွေ ရနေတာပါ ပြန်ပြီး လွမ်းဆွေးတောင့်တနေတာ မဟုတ်ဘူး ။
မျက်ရည်ကျရင် ရှုံးတယ်ဆိုပြီးလဲ ပြောတတ်ကြသေးတယ် ။ တကယ်တော့ အနိုင်အရှုံးဆိုတာ မျက်ရည်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ ။ ကိုယ် ဘာဖြစ်နေပါတယ် ကိုယ် ဘာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို ထုတ်ပြောခွင့် မရှိတဲ့ဘ၀မှာ မျက်ရည်ကျခွင့်လေးတော့ ရချင်မိတယ် ။ ဒါအရှုံးပေးတာ မဟုတ်ဘူး ပျော့ညံ့တာ မဟုတ်ဘူး … ကိုယ့်ဒဏ်ရာကို မျက်ရည်နဲ့ ခဏ မြောချပြီး မေ့ထားလိုက်တာမျိုးပါ ။
အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာ ဝဲတဲ့ မျက်ရည်တွေက ကိုယ့်ကြောင့် သူပူသွားမှာ စိုးတဲ့ စေတနာတွေပါတယ် … ဖုန်ဝင်သွားလို့ပါဆိုပြီး လိမ်ခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေမှာ ကိုယ့်ကြောင့် သူအဆင်မပြေဖြစ်သွားမှာ စိုးတဲ့စိတ်တွေပါတယ် ။